Madaxweyne Xasan: Haleyska jiro Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo ku sugan dalka Mareykanka sheegay in loo baahan yahay in si taxaddar leh leysaga ilaaliyo dabinka ay maleegayaan Al-Shabaab.
Wuxuu tilmaamay in dadka Soomaaliyeed laga doonayo inay fahmaan dagaalka lagula jiro Alshabaab, isagoo tilmaamay inyesan jirin cid ururkaas saaxiib la yahay marka laga reebo dhallinyarada ay adeegsadaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in dalalka qaar ay kooxaha xagjirka ah meelaha ay qabsadaan ay inbadan qaadato in laga saaro, balse marka Soomaaliya meel qabsadaan si fudud looga saaro, dhamaantoodna la laayo.
Wuxuu carabaabay in Al-Shabaab ay dooneyso in madaxda dalka ay isku eedeeyso dhibaatooyinka ay geysanayaan balse loo baahan yahay in leysaga kaashado sidii looga guuleysan lahaa.
Madaxweynaha ayaa sheegay in amniga dalka uu soo wanaagsanaanayo, Al-Shabaabna ay sii dhammaaneyso, islamarkaana laga guuleysan doono.